Soo-saarista iyo Warshadda Warshadda iyo Warshadda Shiinaha ee Huteelka Muraayadda ee Minibar M-25T | AOLGA
Ka-nuugista Hoteelka Muraayadda Minibar M-25T
Faahfaahinta :: 220V-240V ~ / 50Hz ama 110-120V ~ / 60Hz; 60W; 4-12 ℃ (at ambinet is 25 ℃)
Astaamaha: Habka Qaboojinta: Farsamooyinka nuugista, wareegga biyaha ammonia; Minibar ma laha kombiyuutar, ma taageere, ma jiro qayb dhaqaaqa, Freon ma laha, gariir ma leh, aamusan oo wax buuq ah ma soo saarayo, si deggan u shaqaynaya
Soo-nuugista Minibar M-25T waxay dejisaa halbeegyo cusub oo ku jira raaxada martida, soo-bandhigidda badeecadda iyo hufnaanta tamarta. Muujinta tikniyoolajiyadda nuugista ee Mdesafe, 25 l qaboojiyaha minibar -ka gabi ahaanba wuu aamusan yahay hawlgalkiisa iyo dhaqaale ahaanba, sidoo kale. Albaabkeeda galaaska ah iyo iftiinka gudaha ee LED -ka ayaa si fiican u iftiiminaya minibar -ka si loo xoojiyo iibkaaga. Dib-u-hagaajin ikhtiyaari ah: xamilka albaabka, quful, gacanta bidix-dhinac-dhinac, koontaroolka furitaanka albaabka LED.
Habka Qaboojinta: Farsamooyinka nuugista, wareegga biyaha ammonia.
1.Minibar waa mid ka mid ah badeecadaha ku habboon deegaanka, oo aan lahayn fluorine, oo aan wax wasakh ah u keenin aerosphere. Wax -qabad sare oo leh tiknoolajiyad cusub oo si fiican u nuugta iyo qaboojinta ammonia.
2.Minibar ma laha kombiyuutar, ma taageere, ma jiro qayb dhaqaaqaysa, Freon ma laha, gariir ma leh, aamusnaan oo wax qaylo ah ha soo saarin, si deggan u shaqayso. Badeecaduhu si toos ah ayay u dhalaali karaan waxayna ka tirsan yihiin qaboojiyaha qaboojiyaha.
3.Waxay alaabooyinku koontaroolaan heerkulka elektiroonigga ah, taas oo ka dhigaysa heerkulka alaabta.
4.Waxaad si xushmad leh, oo aad leedahay isbeddel yar marka aad bilaabanayso iyo marka aad daminayso.
Xirfadaha albaabka ee badeecaddu waa kuwo bidix iyo midig la beddeli karo.
6. Hawlgal dayactir la'aan ah, keydinta tamarta, cimri dheer iyo damaanad 5 sano ah.
1. Bidix ama midig furan
2. Midab (Madow, Cadaan, iwm)
3. Albaab adag ama Albaab Alwaax ah
4.Sawir astaanta macmiilka
Nooca korantada 5.Power, Tusaalooyinka, nooca Spain, nooca New Zealand, nooca USA, nooca Yurub iwm.
7.AC ama DC
8.Shelving noqon kartaa astaysto si ay ula kulmaan kaydinta gaar ah
• Qolka martida ee Hoteelka, Xafiis, Isbitaal ama Guri iwm.
Tilmaamaha Isticmaalka Absorption Hotel Mini bar
1. Fadlan u oggolow badeecaddu inay shaqeyso 1 saac oo aan culeys lahayn, ka dibna ku rid raashinka marka la isticmaalayo alaabta markii ugu horreysay.
2. Badeecadu waa inay istaagtaa si siman oo aan la dili karin; haddii kale waxay keeni doontaa qaboojin xumo.
3. Waxaa jira gebi ahaanba 5 boos oo ku jira aaladda hagaajinta heerkulka, caadiyan fadlan isticmaal booska Booska 1 ayaa ugu kulul halka booska 5 uu yahay kan ugu qabow.
4. Ha ku ridin raashin aad u badan hal mar golaha wasiirada, fadlan si tartiib ah ugu dar raashinka.
5. Masaafada qaar waa in lagu hayaa raashinka ku kaydsan kabadhka, si hawo qabow ay si xor ah u socoto oo heerkulkuna u ahaado mid siman.
6. Si aad u badbaadiso tamarta, fadlan ku dadaal sida ugu fiican si aad u yarayso waqtiyada furitaanka albaabka iyo sidoo kale u dhaqso mar kasta oo aad albaabka furto.
7. Markaad joojiso isticmaalkeeda, fadlan isticmaal maro qoyan oo jilicsan si aad u nadiifiso gudaha cube, oo hawo ha ku dhex wareegto syuubka si aad uga fogaato in qiiq -ka -gooyuhu uu dumo.
8. Iftiinka LED, 3.6V/1W.
Quful Ikhtiyaar ah
Bar -nuugista Mini
Nidaamka Qaboojinta nuugista
4-12 ℃ （At 25 ℃ Ambient）
Hore: Ka-nuugista Hoteelka Minibar M-25A
Xiga: Ka-nuugista Hoteelka Minibar M-30A
qaboojiyaha albaabka galaaska
minibar albaabka galaaska ah
Minibar -nuugista Hoteelka
Minibar leh Quful
Minib nuugista Hoteelka ...
Khaanadda Hotel Minibar M ...
Hoteelka iyo Isticmaalka Guriga Abs ...